शिक्षाविद्हरुले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण नगरिदिन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन संशोधन भए सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरुले रोक्न माग गरेका हुन् ।
नेपाली बालबालिका बेचिने क्रम बढ्दो : राष्ट्रसंघ
चन्द्रशेखर अधिकारी/दिनेशजंग शाह
राष्ट्रसंघले नेपाली बालबालिका छिमेकी भारत तथा अफ्रिकी मुलुकमा बेचिने क्रम बढो रहेको जनाएको छ । यो समस्याबारे नेपाल सरकार गम्भीर नभएको र बेचबिखन रोक्न आवश्यक कदम नचालेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
ओमनका उपप्रधानमन्त्री सायिद फाहद मोहम्मद अल–सेडले रणनीतिक हिसाबले निकै महत्व अवस्थामा रहेको नेपालले भारत र चीनको विकासबाट फाइदा लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।
दोलखा बजारमा रहेको भीमेश्वर मन्दिरमा रहेको मुख्य शिलामा मंगलबार दिउँसो लगातार दुईपटक ‘पसिना’आएको छ ।नेपालमा ठूलाठूला सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तनहरु, अनष्टका घटनाहरुको पूर्वसूचकको रुपमा लिइने भीमेश्वरमा पसिना आउँदा भक्तजनहरु भेला भएर घण्टी बजाउने, धूप बत्ति गर्ने र मन्दिरका मुख्य व्यक्तिहरुले पंखाले हम्कने गर्छन् ।
सीमावर्ती बजार भान्टाबारीबाट जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका कोसी गाउँपालिका-८ का वडाध्यक्षसहित १२ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुलाई कोसी गाउँपालिका-८ भान्टाबारीमा रहेको शंकर पौडेलको घरबाट सोमबार राति पक्राउ गरिएको थियो । जुवाको खालबाट संघीय समाजवादी फोरमबाट वडाध्यक्ष बनेका विन्देश्वर यादवसहित १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतम हटाइए
हवाई माफिया र बिचौलियाको दबावमा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमलाई पदबाट हटाएका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठान र तीन संस्थाबीच वेग्ला वेग्लै सहमति
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी कल्याण समाजबीच भएको वार्तामा २७ बुँदे सहमति भएको छ ।
रोशी गाउँपालिका-३ शिखरआम्बोटेमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । एकजना घाइते भएका छन् ।
आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले अनुगमन गर्नेलाई कारबाहीको अधिकार नहुँदा कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफू प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश प्रमुखको रुपमा नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् ।
चुनावमा माओवादीसँग तालमेल हुन सक्छ : नेपाल
एमाले नेता माधव नेपालले प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा वामपन्थी पार्टीबीच तालमेल हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बर्दिया र रामेछापमा सवारी दुर्घटना, ३८ जना घाइते
कमल पन्थी, टीकाप्रसाद भट्ट
बर्दिया र रामेछापमा सवारी दुर्घटना हुँदा ३८ जना घाइते भएका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गस्थित बर्दिया बारबर्दिया नपा-९ कतरनियामा रात्री बस पल्टिँदा २४ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।
दसैंका लागि भारतबाट स्वदेश फिर्ने यात्रु बाटोमै लुटिन थालेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा नसालु पदार्थ खुवाएर लुट्ने क्रम बढेको हो । सोमबार मात्रै २ लाखभन्दा बढी रकम लुटिएका ६ नेपाली कामदार अलपत्र अवस्थामा भेटिएका छन् ।
च्यांग्रासँगै भित्रन्छ दसैं
दसैंमा मीठो, स्वादिलो खाने र राम्रो लगाउने संस्कृति छ । यसका लागि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लाग्छ नै तर पोखरामा यतिले मात्रै दसैंको रौनक हुँदैन ।
दसैं मनाउन चार दिनमा आठ लाख यात्रु राजधानीबाट बाहिरिएका छन् । यो संख्या प्रत्येक दिन बढ्दो छ ।
धरहरा पुनर्निर्माणबाट टेलिकमले किन हात झिक्यो ?
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको पुनर्निर्माणबाट नेपाल टेलिकमले हात झिकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
उम्मेदवार छान्दै प्रमुख दलहरू
स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै राजनीतिक दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा जुटेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक मंसिर १० र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा हुन लागेको चुनावका लागि दलहरू उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा लागेका हुन् ।
कुल सांसदको २६ प्रतिशत मात्रको समर्थनमा शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताले नै ऐन संशोधन गलत भएको बताउन थालेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले ऐन संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा तहस–नहस हुने भन्दै नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन थालेका छन् । संगठनले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष विमलेन्द्र निधि, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सदरमुकाम बेनीबाट ११ जना यात्रु बोकेर अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ७ घराम्दी जाँदै गरेको ध १ ज ६६८ नम्बरको बोलेरो जिप सोमबार साँझ ७ बजे अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ७ दोसल्लेमा दुर्घटनामा चालक समेत १२ यात्रु घाइते भएका छन् ।
संसद् भवनमा सोमबार विभिन्न विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा बाहिर युवाको एक समूह विरोधमा उत्रिरहेको थियो भने डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एउटा कोठामा अनशनको तयारीमा जुटै थिए । संसद्मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची हटे उनी अनशन नबस्ने सोचमा थिए ।